Imigomo Nemibandela - I-eGay Shop
Imigomo Yesevisi Nemibandela
Imigomo Nemibandela yemikhiqizo ethengiswa kusayithi https://egay.shop.
Isihloko 1 - Into
Le migomo nemibandela ilawula ukuthengiswa ngu-Egay Shop ku-https://egay.shop.
Lewebhusayithi isebenza yi-Egay Shop. Kuwo wonke isayithi, amagama "thina", "us" nethi "ethu" abhekiselwa kuwo EIsitolo se-gay. EIsitolo se-gay unikeza le webhusayithi, kufaka phakathi lonke ulwazi, amathuluzi kanye nezinsizakalo ezitholakala kule sayithi kuwe, umsebenzisi, zilungiswe ukwamukelwa kwazo zonke izimo, izimo, izinqubomgomo kanye nezaziso ezichazwe lapha.
Isigaba 2 - Imigomo Ye-Online Inthanethi
Ukwephulwa noma ukwephulwa kwanoma yiliphi leMigomo kuzoholela ekunqothulweni okusheshayo kwezinsizakalo zakho
Isigaba 3 - Izimo Ezijwayelekile
Isigaba 4 - Ukunemba, ukugcwalisa nokuqhathaniswa kolwazi
Isigaba 5 - Amanani
Amanani wemikhiqizo yethu aboniswa ema-Euro zonke izintela zifakiwe (i-VAT nezinye izintela ezisebenzayo ngosuku lomyalelo), ngaphandle uma kuboniswe ngenye indlela futhi kungabandakanyi izindleko zokucubungula nezokuthutha. Uma kwenzeka oda ezweni elingaphandle kwedolobha laseFrance ungumngenisi womkhiqizo othintekayo. Imisebenzi yamasiko noma ezinye izintela zendawo noma imisebenzi yokungeniswa noma intela yombuso ingakhokhwa. Lawa malungelo namanani ayiwona umsebenzi EIsitolo se-gay. Zizobe zisezindleko zakho futhi zingumthwalo wakho wedwa, kokubili ngokwemibandela yokumemezela kanye nezinkokhelo eziphathamandla ezifanele kanye nezindikimba zezwe lakho. Sikukwazisa ukuba ubuze ngalezi zici neziphathimandla zendawo. Yonke imiyalo kungakhathaliseki ukuthi imvelaphi yayo iyakhokhwa nge-Euros. EIsitolo se-gay unelungelo lokushintsha amanani alo noma nini, kodwa umkhiqizo uzokhokhwa ngesisekelo semali ekhokhwayo ngesikhathi sokuqinisekiswa komyalelo futhi ngokuya kokutholakala. Imikhiqizo iyahlala yindawo yomphakathi ka EIsitolo se-gay kuze kube yikhokhelo eliphelele lentengo. Isexwayiso: ngokushesha nje lapho uthola imithwalo yemikhiqizo, umngcipheko wokulahlekelwa noma ukulimala kwemikhiqizo udluliselwa kuwe.
Isigaba 6 - Ukuguqulwa koMsebenzi kanye namanani
Isigaba 7 - Imikhiqizo noma Izinsizakalo
I-Athikili 8 - Oda
Ulwazi lwesikhangiso lunikezwa ngesiNgisi futhi luzoqinisekiswa esikhathini sakamuva ngesikhathi sokuqinisekisa kwe-oda yakho. EIsitolo se-gay unelungelo lokubhalisa ukukhokha, futhi hhayi ukuqinisekisa i-oda nganoma yisiphi isizathu, ikakhulukazi uma kunenkinga yokunikezela, noma uma kunzima ngokuphathelene nomyalelo otholiwe.
Isigaba 9 - Ukuqinisekiswa kwe-oda lakho
Noma yimuphi umyalo ovela kwiwebhusayithi https://egay.shop uthatha ukunamathela kumigomo nemibandela yamanje. Noma yikuphi ukuqinisekiswa kwe-oda kubonisa ukunamathela kwakho okugcwele nokuphelele kumibandela evamile yokudayiswa, ngaphandle kokunye noma ukugcinwa. Yonke idatha enikeziwe futhi isiqiniseko esiqoshiwe sizofaneleka ubufakazi bokuthengiselana. Utshela ukuba nolwazi oluphelele. Ukuqinisekiswa kwe-oda kuzodingeka ukuthi usayine futhi wamukele imisebenzi eyenziwe. Isifinyeto sokwaziswa kwe-oda lakho sizokwaziswa kuwe ngekheli le-e-mail lokuqinisekisa kwe-oda yakho.
I-Athikili 10 - Inkokhelo
Iqiniso lokuqinisekisa i-oda lakho lisho ukuthi unesibopho sokukhokha intengo ekhonjisiwe. Ukukhokha kokuthenga kwakho kwenziwa ngekhadi lesikweletu nge-protocol ye-SSL ebhalwe ngokufihliwe.
Isigaba 11 - Imbuyiselo, ukubuyisa & ukuhwebelana
Kunezimo ezithile lapho ukubuyiselwa okuyingxenye kuphela okunikezwa khona:
Ukubuyiselwa kwembuyiselo noma okulahlekile:
Uma usuwenzile konke lokhu futhi ungakatholi ukubuyiselwa imali yakho, sicela uxhumane nathi ngokuchofoza LAPHA.
Ukuthengiswa kwempahla ukuthengiswa kusekelwe ngentengo yokuthengisa.
Sithatha indawo kuphela izinto uma zingenaphutha noma zilimazekile. Uma udinga ukushintshanisa into efanayo, thumela i-imeyili ku-hello@egay.shop.
Isigaba 12 - Ukutholakala
Imikhiqizo yethu inikezwa uma nje ibonakala ku-website https://egay.shop nangaphakathi kwemikhakha yamasheya atholakalayo. Ngemikhiqizo engekho eminye, ukunikezwa kwethu kusebenza ngokuvumelana nokutholakala kwabathengi bethu. Uma kungabikho kwemikhiqizo ngemuva kokubeka i-oda lakho, sizokwazisa nge-imeyili. I-oda lakho lizokhanselwa ngokuzenzakalelayo futhi ngeke kube khona ukukhishwa kwebhange.
Isigaba 13 - Ukulethwa
Imikhiqizo ihanjiswa ekhelini lokulethwa elikhonjisiwe ngesikhathi senqubo ye-oda, ngaphakathi kwesikhathi esiboniswe ekhasini lokuqinisekisa le-oda. Uma kwenzeka ukubambezeleka kokuthunyelwa, i-imeyili izothunyelwa ukuze ikutshele ukuthi kungenzeka kanjani ngesikhathi sokulethwa esibonisiwe kuwe. Uma kwenzeka ukulethwa ngumthumeli, u-Egay Shop angeke abekwe icala lokulethwa kwesikhathi ngenxa yokungabi khona kwamakhasimende emva kweziphakamiso eziningana zokuqokwa. Uma kwenzeka ukulethwa ngaphandle kwe-European Union, izintela ezengeziwe zingasetshenziswa amasiko angena ekufikeni kwezwe lomamukeli wokulethwa kwezidingo. Lezi zintela ziwumthwalo womuntu othola umyalelo.
Isigaba 14 - Ukuchithwa kokukhokha kanye nokwaziswa kwe-Akhawunti
Isigaba 15 - Amathuluzi okuzithandela
Singase futhi, ngokuzayo, sinikeze amasevisi amasha kanye / noma izici ngokusebenzisa iwebhusayithi (kubandakanya, ukukhululwa kwamathuluzi amasha nezinsiza).
Izici ezintsha kanye / noma amasevisi azophinde agxile kule Migomo Yesevisi.
Isihloko 16 - Izixhumanisi Zesithathu
Asikho icala lokulimala noma ukulimala okuhlobene nokuthengwa noma ukusetshenziswa kwezimpahla, izinsizakalo, izinsiza, okuqukethwe, noma ezinye izinkokhelo ezenziwe ngokuphathelene nanoma yikuphi amawebhusayithi wesithathu. Sicela ubuyekeze ngokucophelela inqubomgomo nezinkambiso zomuntu wesithathu futhi uqinisekise ukuthi uyaziqonda ngaphambi kokuba uhlanganyele kunoma yikuphi ukuthengiselana.
Izikhalazo, izimangalo, ukukhathazeka, noma imibuzo emayelana nemikhiqizo yangaphandle kumele iqondiswe kumuntu wesithathu.
Isigaba 17 - Amazwana womsebenzisi, impendulo kanye nezinye iziphakamiso
Uyavuma ukuthi ukuphawula kwakho ngeke kwephule noma yiliphi ilungelo lomuntu wesithathu, kufaka phakathi i-copyright, uphawu lokuthengisa, ubumfihlo, ubuntu noma omunye ilungelo lomuntu siqu noma elifanele. Uyaqhubeka uvuma ukuthi amazwana akho angeke aqukethe izinto ezimbi noma ezingekho emthethweni, ezihlambalazayo noma ezihlambalazayo, noma aqukethe noma yikuphi igciwane lekhompyutha noma enye i-malware engayithinta nganoma iyiphi indlela ukusebenza kweNsizakalo noma iyiphi iwebhusayithi ehlobene. Ungase ungasebenzisi ikheli le-imeyli elingamanga, uzenze sengathi ungomunye umuntu ngaphandle kwakho, noma mhlawumbe usikhohlise noma abantu abathintekayo mayelana nemvelaphi yanoma yikuphi ukuphawula. Wena unomthwalo wemfanelo kuphela kunoma yikuphi ukuphawula okwenzayo nokuqondile kwawo.
Asithatha umthwalo wemfanelo futhi asikwenzeki ukuthi yikuphi ukuphawula okuthunyelwe nguwe noma omunye umuntu wesithathu.
Isigaba 18 - Ulwazi Lomuntu siqu
Isigaba 19 - Amaphutha, ukungalungi nokukhishwa
Asazibophezeli ukuvuselela, ukuchibiyela noma ukucacisa ulwazi ku-Service noma kunoma yiliphi iwebhusayithi ehlobene, kufaka ngaphandle kwemingcele, ulwazi lwezentengo, ngaphandle kokuthi kudingeke umthetho.
Akukho ukubuyekeza okucacisiwe noma usuku lokuvuselela olwenziwe ku-Service noma kunoma iyiphi iwebhusayithi ehlobene, kufanele kuthathwe ukuze kuboniswe ukuthi lonke ulwazi ku-Service noma kunoma yiliphi iwebhusayithi elihlobene lishintshiwe noma libuyekeziwe.
Isigaba 20 - Ukusetshenziswa Okuvinjelwe
Isigaba 21 - Ukuziphendulela kweziqinisekiso; Ukunciphisa kweMfanelo
Ngeke kwenzeke ukuthi u-Egay Shop, abaqondisi bethu, izikhulu, abasebenzi, abathintekayo, ama-agent, izinkontileka, abaqeqeshi, abahlinzeki, abahlinzeki bezinsizakalo noma abanikezeli bamalayisense babe nobophezelo nanoma yikuphi ukulimala, ukulahleka, isimangalo noma noma yikuphi okuqondile, okungaqondile, okusobala, okujezisa, okukhethekile, noma ukulimala okulinganayo kwanoma yiluphi uhlobo, kufaka phakathi, ngaphandle kwemingcele elahlekile, inzuzo elahlekile, imali elahlekile, ukulahlekelwa kwedatha, izindleko zokufaka esikhundleni, noma ukulimala okunjalo, kungakhathaliseki ukuthi kusekelwe enkontileka, okungahambi kahle (okufaka ukunganaki), icala eliqinile noma okunye, okuvela ukusetshenziswa kwakho kwanoma yiliphi isevisi noma yimiphi imikhiqizo etholakale isebenzisa isevisi, noma nganoma yisiphi esinye isimangalo esihlobene nganoma iyiphi indlela ekusetshenzisweni kwakho kwensizakalo noma yimuphi umkhiqizo, kubandakanya, kodwa kungagciniwe, noma yimaphi amaphutha noma ukushiywa kunoma yikuphi okuqukethwe, noma noma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo olwenziwe ngenxa yokusetshenziswa kwensizakalo noma noma yikuphi okuqukethwe (noma umkhiqizo) okuthunyelwe, okudlulisiwe, noma okunye okwenziwe nge-service, noma ngabe kunconywe ukuthi kungenzeka.
Ngenxa yokuthi abanye bathi noma iziphathimandla azivumeli ukukhipha noma ukukhawulelwa kwecala lokulimala okulandelanayo noma okungahle kwenzeke, kulawo mazwe noma iziphathimandla, inkokhelo yethu iyobekelwe kuphela ekuvunyeni komthetho.
Isigaba 22 - Ukukhokhelwa
Uyavuma ukuvuselela, ukuvikela nokugcina i-Egay Shop engenabungozi kanye nomzali wethu, izinsizakalo, abambisene nabo, abalingani, abalingani, abaqondisi, ama-agent, izinkontileka, abahlinzeki bamalayisense, abahlinzeki bezinsizakalo, abathintekayo, abahlinzeki bezinsizakalo, abaqeqeshi nabasebenzi, abangenabungozi kunoma yisiphi isimangalo noma ukufunwa, kubandakanya izimali zommeli ezinengqondo, ezenziwe yimuphi umuntu wesithathu ngenxa yokuphulwa kwakho kwale Migomo Yesevisi noma amadokhumenti afaka ngokubhekisela, noma ukwephulwa kwanoma yimuphi umthetho noma amalungelo omuntu wesithathu.
Isigaba 23 - Ukuhluleka
Isigaba 24- Ukuqedwa
Isigaba 25 - Isivumelwano Sonke
Isigaba 26 - Isibopho
Imikhiqizo ehlongozwayo ihambisana nomthetho waseFrance osebenzayo. Umthwalo we-Egay Shop awukwazi ukubandakanyeka uma kungavumelani nomthetho wezwe lapho umkhiqizo uhanjiswa khona. Kungumthwalo wakho ukuhlola iziphathimandla zendawo amathuba okungenisa noma ukusebenzisa imikhiqizo noma amasevisi ohlose ukuyala. Ngaphezu kwalokho, Isitolo se-Egay angeke abe necala lokulimala okubangelwa ukusetshenziswa kabi komkhiqizo owathengiwe. Ekugcineni umthwalo wemfanelo Isitolo se-Egay angeke abekwe icala nganoma yikuphi ukuphazamiseka noma ukulimala okuhambisana nokusetshenziswa kwe-intanethi, kufaka phakathi ikhefu enkonzweni, ukungena ngaphakathi noma ukutholakala kwamagciwane ekhompyutha.
Isigaba 27 - Umthetho osebenzayo uma kwenzeka izingxabano
Le Migomo Yesevisi nanoma yiziphi izivumelwano ezihlukile lapho sikunikeza khona Izinsizakalo ziyolawulwa futhi zenziwe ngokuhambisana nemithetho yaseFrance.
Ulimi lwale nkontileka yisiNgisi. Lezi zimiso zokudayiswa zihambisana nomthetho waseFrance. Uma kwenzeka impikiswano, izinkantolo zaseFrance zizokwazi ukuphela.
Isigaba 28 - Impahla yobuhlakani
Zonke izakhi zesayithi https://egay.shop zihlala futhi zihlala impahla engokwengqondo nokukhethekile Isitolo se-Egay noma abantu abathathu abagunyazile Isitolo se-Egay ukuwasebenzisa. Akekho ogunyaziwe ukuzala, ukuxhaphaza, ukuhanjiswa, noma ukusebenzisa noma yiziphi izinhloso, ngisho nakancane, izakhi zesayithi eziyi-software, ezibonakalayo noma ezizwakalayo. Noma iyiphi isixhumanisi esilula noma se-hypertext sivinjelwe ngokuqinile ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi ebhaliwe Isitolo se-Egay . Izizathu ezikhethekile zemikhiqizo ekhonjiswe ngaleyo ndlela ekuchazweni kwayo yindawo ehlakaniphile futhi ekhethekile Isitolo se-Egay. Noma yimuphi umuntu wemvelo noma wezomthetho ukukopisha konke noma ingxenye yalezi zinkampani unecala lokushushiswa.
Isigaba 29 - Shintsha Imigomo Yesevisi
Isigaba 30 - Imininingwane Yokuxhumana
Imibuzo mayelana neMigomo Yesevisi kufanele ithunyelwe kithi ngokuchofoza LAPHA.